गायक समिरको ड्रिम प्रोजेक्ट मोनलिसा २ को कान्छीको अल्लारे जोवनको भिडीयो रिलीज - Purbeli News
गायक समिरको ड्रिम प्रोजेक्ट मोनलिसा २ को कान्छीको अल्लारे जोवनको भिडीयो रिलीज
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०६, २०७३ समय: १५:१८:११
इटहरी ।गायक समीर बिक को कान्छी को अल्लारे जोवन गितको भिडीयो रिलीज भएको छ । गायक समीर बि.क को दोस्रो एल्बम मोनालिसा २ मा रहेको कान्छी को अल्लारे जोवन बोल्को गीतले छोटो समयमा राम्रै चर्चा बटुली रहेको छ् । ५ बर्ष ग्याप पछि उनले मोनालिसा २ बजारमा ल्याउने तयारीमा छन । यति खेर समिर मोनालिसा २ एल्बमको अन्य गित रेकर्डिङमा ब्यस्त रहेका छन । पुर्बेली गायक समिर बिगत ७ बर्षको देखी निरन्तर संगित क्षेत्रमा लागिरहेका छन ।
उनी सबै प्रकारका गित गाउन रुचाउछन् भने आफुलाई पप तथा आधुनिक गायक भन्छन । पहिलो गित मिमीरे यो बिहानी लाई ७ बर्ष अगाडी रेकर्ड गरेर ब्याबसायीक गायकको परिचय बनाएका समिर २०६८ सालमा मोनालिसा एल्बम मा रहेको प्रिय तिम्ले माया मारेउनी बोल को गीत बाट इमेज अवर्ड् प्राप्त गर्न सफल भईसकेका छन । त्यस्तै कालीका म्युजिक अर्वाको टप ५ मा परीसकेका छन ।
कान्छी को अल्लारे जोवन गितमा शब्द तथन संगित संदिप कार्कीको रहेको छ । उर्लबरी र झापा का बिभिन्न स्थल मा छायाङ्कन गरिएको उक्त भिड्यो को निर्देशन बिबेक हिङ्माङ को रहेको छ् । भिड्यो लाई सुमन योन्जनले खीचेका हुन । भिडियो मा हरी,रोजी,सुमन,बिना,मिलन र प्रमिला को अभिनय रहेको छ । समिरले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट भएकाले मोनलिसा २ लाई हदै मेहेनत तथा ५ बर्षको ग्याप पछि ल्याउन लागेको बताएका छन ।
नब्बे बर्षकी बृद्धाको पीडाः छोरीज्वाईंले सम्पत्ति हत्याएर घरबाट निकाले, सहारा खोज्दै सडकमा (भिडियाे सहित)
अर्जेन्टिनाको फ्यान हुँ भन्दै जर्सीमा लक्ष्मी आचार्यको पोज (भिडियो)
सुतिरहेको कुकुरमाथि कालोपत्रे ( तस्विर तथा भिडियो )
ब्ल्याकमेल गर्ने पत्रकार घुस सहित रंगहात पक्राउ । २० हजार घुस नपाउदा सवारी दर्ता रद्ध ! (भिडियाे)
आमाको घाटि रेटेर हत्या गर्ने प्रयास, पेटको बच्चालाई छुरा प्रहार गरी हत्या (भिडियाे सहित)
सार्वजनिक कार्यक्रममा यसकारण रोइन् करिश्मा मानन्धर ? (भिडियो)
महिलालाई यसरी कुट्ने जग्गा दलालहरु प्रहरी हिरासतमा, पूर्व आईजीको पावर देखाउने माथि छानविन सुरु (भिडियोसहित)